ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: ကျွန်မနှင့် အိမ်ထောင်ရေး
ရေးသားသူ may16 at Sunday, November 08, 2009
ဟေမာန် November 8, 2009 at 9:05 PM
ကွာ ၃ ကွာ၊ ပါ ၃ ပါ နဲ့ ချာ ၃ ချာကို အနာဂါတ် အတွက် ရင်ထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ
မှတ်သွားပါတယ် အမရေ .... ကျေးဇူးနော်
YoungGun November 8, 2009 at 11:33 PM
ရန်းဂန်းနဲ့ သက်ဆိုင်သူတစ်ဦးရယ်၊ တခြားသော မိန်းခလေးသူငယ်ချင်းတွေရယ်ဆီကို ဒီပို့စ်ကို ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။ ဖော်ဝက်ဒ်လဲ လင့်ခ်နဲ့တကွ ပေးပို့သွားပါမယ်။ တခါမှ မကြားဖူးတဲ့ အချက်တွေပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဗညားရှိန် November 9, 2009 at 7:39 AM
မှတ်သားသွားတယ် ကွာ ၃ ကွာ ပါ ၃ ပါ နာ ၃ နာ ကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်သွားတယ် မမေရေ . . . .
မိုးထက်အိမ် November 9, 2009 at 1:04 PM
ကိုzOX ကြီးကတော့ လုပ်လိုက်ပြီ ... ညီမလည်း ဘာရေးရမှန်း မသိလို့ ကြာနေတယ် ... :) ခု မမ (လေးစားမှု အရ အဲလိုပဲ ခေါ်လိုက်တယ်နော် ) တို့ ရေးထားတာလေးကျ ကိုယ်လည်း မကြားဖူးဘူး.. မှတ်သားဖို့လည်း ကောင်းတယ်.....
ကောင်းကင်ပြာ November 10, 2009 at 2:48 PM
တို့တောင် အဲ့ဒါတွေ မသိဘူးတော့၊ မှတ်သားစရာပဲ
မောင်ကောင်း November 12, 2009 at 4:33 AM
အကြောင်းအရာလေးနဲ့ ဖော်ပြပေးထားတာဟာ သိသင့်ပါပေတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စာပေလေးပါပဲအစ်မရေ..။ တန်ဖိုးရှိတဲ့စာပေတွေရေးသားရင်း မိမိရဲ့တန်ဖိုးလည်း မြင့်သထက်မြင့်လာနိုင်ပါစေအစ်မ။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေ..။
Waing November 12, 2009 at 1:06 PM
ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးမှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ် အိမ်ထောင်မပြုခင် ရည်းစားထားမယ်ဆိုရင်တောင် ကွာသုံးကွာ၊ ပါသုံးပါ နှင့် ချာသုံးချာ ကို သတိထားပြီးမှ ရည်းစားထားရမယ် အခုလို သိခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါး)
aRies November 28, 2009 at 9:57 PM
အဟဲ..မသိလို့ သာပေ့ါ.. မေ၁၆ ရယ်..။
သိများသိရင် မည်သို့ နေမည်မသိ..။
ကွာသုံးကွာ ၊ ပါသုံး ပါ ၊ ချာ သုံး ချာ ဆိုတာ ကိုတစ်ခါမှ မသိခဲဘူး..။ အခုမှ သိခွင့် ရတာ ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါ ။
hello Ma May
I would like to share in my facebook. if u didn't agree, i will take it off. please let me know
may16 November 25, 2010 at 4:48 PM
You can share my post thanks